जलबिन्दुबारे चिकित्सक र बिरामीबिच अन्तरक्रिया
जलबिन्दु भएका बिरामी र चिकित्सकबिचको सम्बन्ध सुदृढ गराउन जलविन्दु सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ।
नेपाल आँखा अस्पातालेले जलबिन्दू विशेषज्ञ र चार पटक जलबिन्दु भएका बिरामीबीच अन्तरक्रिया गरेको हो।
अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरु एक पटक आएपछि फ्लोअपमा नआउने, औषधि नियमति प्रयोग नगर्ने, औषधि प्रयोग गर्ने सही तरिका नजान्नेजस्ता समस्या देखिएपछि चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्ध सुधार ल्याउँदै जलबिन्दुबारे सचेत गराउन अन्तरक्रिया सुरु गरिएको अस्पतालकी जलबिन्दु विशेषज्ञ डा अर्चना शर्माले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘एक पटक जलबिन्दु देखिएपछि जीवनभर आँखा औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । एक दिन पनि छुटाउन हुन्न । विशेष गरि बिरामी आफैंलाई आफ्नो स्याहार कसरी गर्ने ? औषधि प्रयोग गर्दाका साइडइफेक्टका बारेमा जानकारी दिने गरेका छौँ ।’
अर्का जलबिन्दु विशेषज्ञ नियाज कौसर मिकरानीले जलबिन्दुको औषधि महंगो हुने भएकाले सही तरिकाले खेर नफालीनियामित गर्नुपर्ने बताए।
‘‘कतिपय औषधिले आँखा सुख्खा बनाउने, आँखामा गाजल लगाएजस्तो कालो रंग बस्ने, परेला लामो हुने, एलर्जी आउने, तनाव बढाउने, मुटुको समस्याजस्ता साइडइफेक्टस देखिन सक्छ । यस्तो बेलामा औषधि प्रयोग गर्न छाड्नुहुन्न, बरु चिकित्सककहाँ गएर सल्लाह दिनुपर्छ,’ उनले भने। अस्पतालले हरेक तीन महिनामा यस्तो अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ।
उक्त अवसरमा औषधि कसरी खोल्ने ? कसरी आँखा औषधि राख्ने ? भनेर बिरामीलाई सिकाइएको थियो।